Mifampiresaha: Aza adino mihitsy ny fihaonambe | Martech Zone
Mifampiresaha: Aza adino mihitsy ny fihaonambe
Alatsinainy, Septambra 16, 2013 Zoma, Jona 8, 2018 Douglas Karr
Toa isaky ny roa herinandro aho dia misento rehefa tsy mahita fihaonambe iray hafa izay misy namako maromaro miteny na manatrika. Tsy hoe tsy miezaka ny haharaka aho…
Manomeza hevitra manantena ny hanova izany amin'ny tagline Aza adino mihitsy ny fihaonambe hafa.
Navoakan'izy ireo a Manifesto ao amin'ny tranonkalany, faritra 10 ahafahantsika manatsara ny fihaonambe:
Mikaroka fihaonambe amin'ny Internet misy lesoka. Izay ihany fa raha manandrana manivana valiny arakaraka ny toerana, ny fahalianana, ny fiteny ary ny fotoana ianao. Sokajy iray manontolo amin'ny fiainana izay tsy nahomby ny fikarohana.
Amin'izao fotoana izao angamba ianao tsy hita tamin'ny kaonferansa mahafinaritra any ho any ary tsy hainao akory. Mila rafitra tsaratsara kokoa isika hitazonana antsika amin'ny loop. Raha tokony hikaroka fihaonambe dia tokony hahita antsika ireo kaonferansa mifandraika.
Most tranokala fihaonambe mahatonga antsika hahatsapa toy ny tamin'ny taona 1999, nefa tsy mora velively ny namorona traikefa nahafinaritra be mpampiasa tamin'ny Internet. Ahoana no fomba hampielezantsika ity banga hita eo amin'ny mpikarakara sy ny teknolojia ity?
Mihena ny fotoana sy ny vola azon'ny mpiasa antonony, midika izany fa matetika isika no voatery mandefa kaonferansa izay tena tadiavintsika. Fa ahoana no ahafahantsika mandray anjara amin'ny fomba mandaitra amin'ny kaonferansa tsy eo? Amin'ny alàlan'ny fandrosoana amin'ny fifandraisana lavitra dia tokony hisy izany ankehitriny.
Sarotra loatra ny mahazo fidirana amin'ny fahalalana novokarina ary natolotra tamin'ny kaonferansa. Hahita sombin-javatra miparitaka eraky ny tranonkala ianao, amin'ny tamba-jotra sosialy, ao anaty boaty ary amin'ny kapila mafy. Fa aiza no ahitanao ny sary feno sy ahitanao izay tena tadiavinao?
Ao amin'ny kolontsainay avara-pianarana dia mety ho kely kokoa isan'andro ny fahafahan'ny olona tokan-tena mahalala mihoatra ny vahoaka 200. Ahoana no ahafahantsika mampiasa teknolojia mioty ny fahendrena iraisana amin'ireo saina mahafinaritra rehetra manatrika ny fihaonambe ho avy eo?
Androany tsy fantatrao matetika iza no handeha hanao fihaonambe mandra-pahatonganao any. Ary aorian'ny fihaonambe dia matetika ianao no tsy afaka mifandray indray amin'ny olona nifanena taminao. Azo antoka fa tsy maintsy misy fomba tsara kokoa.
Amin'ny olona maro dia mety ho sarotra ny mankeo amin'ny olon-tsy fantatra fotsiny ary manomboka miresaka. Maninona isika no tsy afaka manana rafitra amin'ny toerana azontsika atao manomboka resaka alohan'ny fihaonambe, avy eo manohy amin'ny fihaonambe ary na dia efa nifarana aza?
Na dia manatrika ara-batana aza isika, ny ampahany amin'ny saintsika dia atokana tsy tapaka amin'ny fiainantsika amin'ny Internet. Ahoana no fomba hanovantsika azy ity ho zavatra tsara eo amin'ny sehatry ny fihaonambe? Ary ahoana no anaovantsika izany mamorona dikany amin'ny tabataba nomerika izay toa toa manaloka ny fepetra amin'ny fianarana lalina?
Rahoviana no mahomby ny kaonferansa? Ahoana no handrefesantsika ny tena fiantraikan'ny kaonferansa, samy ho an'ny mpikarakara, mpandahateny, toerana ary mpanatrika? Isaky ny dolara laniana amin'ny fihaonambe dia tokony ho fantatsika ny fiverenan'ny vola.
Midira ary araho aho amin'ny Conferize mba hahafantarako ireo fihaonambe alefanao, fantatrao izay itenenako, ary afaka mifanenjika isika!
Tags: tambajotra fihaonambemanome hevitramitadiava fihaonambefihaonambe fivarotanaTambazotram-pifandraisana
Amplitude: Analytics amin'ny finday ho an'ireo mpanapa-kevitra
Sep 19, 2013 amin'ny 7: 16 AM
Salama Douglas - lahatsoratra mahafinaritra ary misaotra noho ny fahalianana! Aza manadino.